तपाई पनि सेक्स भिडियो हेर्नुहुन्छ किन ? - Kantipath.com
तपाई पनि सेक्स भिडियो हेर्नुहुन्छ किन ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय यौन शिक्षाको विषयमा चासो बढ्दै गइरहेको छ । प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि पछिल्लो समय अनलाईनमा पोर्न भिडियो हेर्नेको संख्या बढेको छ । यौन सम्बन्ध र व्यवहारिक विज्ञान विशेषज्ञका अनुसार सेक्स एउटा यस्तो समस्या होे, जसलाई लिएर किशोरहरुमा धेरै जान्ने इच्छा हुन्छ ।
त्यो जान्नका लागि अनलाईनमा सेक्स भिडियो हेर्छन् । आजभोली सोशल मीडिया र वेबसाइडले गर्दा यो बारेमा जान्न धेरै सजिलो भएको छ । तर अधिकांश जानकारी लिँदा यो पोर्नग्राफीको रुपमा देखा पर्छ ।
एण्ड्रोमेडा एण्ड्रोलजी सेण्टरका निर्देशक डा.सुधाकर कृष्णमूर्ति भन्छन्,-‘म सेक्सलाई लिएर अज्ञानता नै यसको दोषी मान्छु । मानिसहरुलाई पहिला स्वस्थ सेक्सको बारेमा जान्न जरुरी छ । पोर्न भनेको उसको स्वरुप मात्रै हो ।’
उनी यस्तो चिकित्सक हुन जो एण्ड्रोलोजीमा पहिलो पटक काम गरेर सफतला पाएका व्यक्ति हुन् । यो पुरुषको प्रजनन क्रियासँग सम्बन्धित गड़बड़ीलाई समाधान गर्ने चिकित्सा शाखा हो ।
उनी भन्छन्-‘एक शिक्षित महिला तथा पुरुषले पोर्न भिडियोलाई देह सुखको माध्यम मात्रै मान्दैनन्, बल्कि सँगै भएको र अझै नजिक छन् भन्ने प्रयासलाई देखाउँछ । यो किशोरहरुसँग मात्र होइन् हरकोहीसँग सेक्स गर्न मजा लिन हेर्ने गरिन्छ ।’
डर यो कुराको छ कि सजिलै उपलब्ध हुने अनलाइन पोर्नले खतरनाक यौन व्यवहारका लागि युवालाई उत्प्रेरित गर्छ, विशेषगरी यस्तो देश जहाँ युवाहरुको जनसंख्या विश्वमा सर्वाधिक हुन्छ ।
डाक्टर कृष्णमुर्तिका अनुसार सेक्स उत्तेजना बढाउने कामका साथै पोेर्न भिडियोले यौन जन्य अपराध समेत जन्माउने गरेको छ । युवाहरुको मस्तिष्कमा गहिरो प्रभाव पारेर उनीहरुलाई उत्तेजित पारेर यौन अपराधका लागि बाध्य पार्ने गरेको चिकित्सकहरुको निष्कर्ष छ ।
चिकित्सकका अनुसार नेपालमा मात्रै ८० लाख बढीले पोर्न भिडियो हेर्ने गर्छन् । पोर्न भिडियो हेर्नुको मुख्य उद्देश्य यौन उत्तेजना बढाउनु नै भएको उनीहरुको ठहर छ । पछिल्लो समय बढीहरेका बलात्कारका घटना पनि पोर्न भिडियोकै कारण भएको बताइएको छ ।
पोर्न भिडियो विशेषगरी युवापुस्ताले हेर्ने गर्छन् । डाक्टर कृष्णमुर्ति भन्छन्-‘युवा अवस्था भनेको जवानीको अवस्था हो । यो बेला जवानीको जोशलाई थप सक्रिया बनाउन युवायुवतीले पोर्न भिडियो हेर्छन् । तर यस्ले नकारात्मक असर पनि पार्छ ।’
उनका अनुसार हाम्रो समाजमा प्रायजसो १५ देखि ५० वर्षसम्मका व्यक्तिले पोर्न भिडियो हेर्ने गरेका छन् । नेपालमा महिला भन्दा पुरुषले बढी पोर्न भिडियो हेर्ने गर्छन् । एजेन्सी
Previous Previous post: तामाको भाडामा यी खानेकुरा नराख्नुहोस विष बन्छ !
Next Next post: कागबेनीमा बस दुर्घटना, ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ५ पुग्यो
म्याग्दीका क्याङ्गलो सार्कीको कथा : डोको बुनेरै बित्यो जवानी
‘अब त बाचुन्जेल घरको छाना फेर्न नपर्ला’
‘इन्द्रेणी’का अध्यक्ष कृष्ण कँडेलद्वारा मेलम्चीका बाढीपहिरो पीडितलाई १८ लाख सहयोग
महान्यायाधिवक्ताको शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति अनुपस्थित
दुरलेकमा पदमार्ग र आश्रयस्थल निर्माण
दरै भाषाको संरक्षण नहुँदा समुदायबाट नै यो भाषा विस्थापित
मनाङमा यर्तुङ्ग पर्व अर्थात् घोडाचडी पर्व शुरु
क्यान्सरबाट बचाउँने यी १० खानेकुरा
अंगारले दात मात्र होइन अनुहार पनि चम्काउछ ,यसरी प्रयोग गर्नुहोस !
यस्ता छन् महिलाले अत्याधिक मन पराउने यौन आसन
मौसम बिभागले भन्यो, ‘पाँच दिन हावाहुरीसहित भारी वर्षाको सम्भावना’
‘सरकार ! तुइन विस्थापन गरियोस्’
सरकारद्वारा भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज
नेपालमा खोप उत्पादक कम्पनीलाई अनुमति दिने सरकारको निर्णय
सङ्क्रमण बढ्यो, काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पताल भरिए
पारसको निर्णय अप्रत्यासित : क्यान अध्यक्ष
महाकालीमा बेपत्ता जयसिंह धामीको खोजी जारी छ : गृहमन्त्री
भूमाफियाले हडपेको सार्वजनिक जग्गामा उद्यान बनाइँदै